Musha - Izwi Sheyo • Vaparidzi Vokufungisisa uye Kuparadzwa
Vaparidzi VOKUFUNGA NEDESTINY
Iwe ikozvino wakagadzirira kuongorora mune zvakakosha zvakakosha kwauri semunhu-izvo zviri mubhuku racho Kufunga Nekupedzisira naHarold W. Percival, mumwe wevanonyanya kufunga nezvezana remakore re20th. Mukudhindwa kwemakore anopfuura makumi manomwe, Kufunga Nekupedzisira ndechimwe chezvakakwana zvakakwana uye zvakazarurirwa zvakazarurwa kuvanhu.
Chinangwa chikuru chebhundaneti iyi ndechekuita Kufunga Nekupedzisira, pamwe nemamwe mabhuku aVaPercival, anowanikwa kuvanhu venyika. Zvose izvi mabhuku zvingave zvino kuverengwa paIndaneti uye zvinogona kuwanikwa mumabhuku edu. Kana iyi ndiyo yekuongorora kwako kwekutanga Kufunga Nekupedzisira, ungangoda kutanga neChinyorwa Chekutanga uye Nhanganyaya.
Iwo ma geometric zviratidzo anoshandiswa pane ino saiti anoratidza metaphysical misimboti iyo inoratidzwa uye kutsanangurwa mukati Kufunga Nekupedzisira. Mamwe mashoko pamusoro pezviratidzo izvi anogona kuwanikwa pano.
Kunyangwe nhoroondo yatiratidza kuti vanhu vanowanzo tenderera kukudza nekukudza munhu ane chimiro chaHW Percival, iye pachake aive akatsiga kuti aisada kutorwa semudzidzisi. Anobvunza kuti zvirevo zviri Kufunga Nekupedzisira kutongwa nechokwadi chiri mumunhu mumwe nomumwe; saka, anodzorera muverengi kwaari kana kuti:
Handifungi kuti ndiparidze kune ani zvake; Handifungi somuparidzi kana mudzidzisi. Dai zvisiri kuti ini ndine mhosva yebhuku racho, ndingada kuti hupenyu hwangu hurege kunzi sevanyora. Ukuru hwezvidzidzo zvandinopa ruzivo, kunondisunungura uye kunondisunungura kubva pakuzvifunga uye kunorega kukumbira kwekuzvininipisa. Ndinotya kutaura zvisinganzwisisiki uye zvinotyisa kumunhu anoziva uye asingafi uri mumitumbi yose yevanhu; uye ini ndinotora pachena kuti munhu wacho achasarudza zvaanoda kana kuti haazoiti nemashoko akaiswa.
Percival's Kufunga Nekupedzisira inofanirwa kupedza chero kutsvagisa kwakakomba kutsvaga kwakanyorwa ruzivo nezve hupenyu. Munyori anoratidza kuti anoziva kwaanotaura nezvazvo. Iko hakuna mutauro usinganzwisisike wechitendero uye hapana fungidziro. Chaizvoizvo akasarudzika mumhando iyi, Percival akanyora zvaanoziva, uye anoziva zvakawanda - zvirokwazvo kupfuura chero mumwe munyori anozivikanwa. Kana iwe uchinetseka nezvekuti ndiwe ani, nei uripano, chimiro chechisiko kana revo yehupenyu ipapo Percival haakuregere iwe pasi ... Gadzirira!
Iri ndiro rimwe remabhuku anonyanya kukosha akambonyorwa munhoroondo inozivikanwa uye isingazivikanwi yepasi rino. Pfungwa uye ruzivo zvakaratidza kufarira kufunga, uye ine "chindori" chechokwadi. HW Percival inenge isingazivikanwi kubatsira kune vanhu, sezvo zvipo zvake zvinyorwa zvicharatidza, kana zvisingasaruri zvichitsvakurudzwa. Ndinoshamiswa nokushayikwa kwebasa rake mu "mazhinji kuverengerwa kuverenga" mazita pamagumo emabhuku akawanda akaoma uye anokosha andakaverenga. Zvechokwadi ndiye chimwe chezvinhu zvakavanzika zvakachengetedzwa munyika yevanhu vanofunga. Kuchemera kunonakidza uye manzwiro okuonga anovhiringirwa mukati, chero nguva pandinofunga nezvehupenyu hwakakomborerwa, unozivikanwa munyika yevanhu saHarold Waldwin Percival.
Bhuku rakanakisa randati ndamboverenga; yakadzika kwazvo uye inotsanangura zvese nezve kuvapo kwemunhu. Buddha akataura kare kare iyo pfungwa ndiyo mai vezviito zvese. Hapana chinhu chiri nani kupfuura iri bhuku kutsanangura zvakadzama. Ndatenda.
Inzwi reVadzidzi vedu